Kushandisa bamboo inzira yakanaka yekushongedza imba yako |
Nhasi kune nzira dzakawanda dzekushongedza imba ine zvekunze fanicha yeakasarudzika dhizaini. Kunyangwe iwe uchida yeAsia kana yeWestern décor, iwe ungangofarira kushandisa bamboo kana rattan fanicha kana pasi kuti upe imba yako kuratidzika kwakasarudzika uye kunzwa. Nhengo yemhuri yehuswa, senge isimbi yakatetepa iyo yakashandiswa neveEasterner kumidziyo yavo yekumba kwemazana emakore. Rattan, kune rumwe rutivi, rwakawanda rwemuzambiringa-senge chimiro, kunyange chakasimba. Iine ganda rekunze, kusiyana nemishenjere, rinoita kuti rikodzere kuwelda kana kumisikidza fenicha uye zvidimbu zvepasi pamwe chete. Ichi ndicho chikonzero vatengi vazhinji mazuva ano vachikumbira rattan pane midziyo yemishenjere.
Bamboo inokura muAsia, zvikamu zveAfrica neNorth America, uye kuchamhembe kweAustralia. Nekudaro, kana bamboo kana rattan haina kugadzirirwa zvakanyanya kuitisa zvinangwa zvekutengesa. Zvichiri zvitsva uye zvisingadhuri, zvese mbichana uye rattan zvinowedzera zvine mutsindo zvetsika yekuEastern kumba wakarimwa zvine hungwaru. Iwe unogona kutanga nezvishoma kuti uone kuti unozvida sei, uye wozowedzera zvimwe kupedzisa nyaradzo uye runako rweimba yako dhizaini uye yekushongedza chirongwa.
Bamboo rugs, mameti, uye pasi zvinopa hwaro hwakakosha husingadhuri pane hwetsika hwakarukwa kapeti. Nekudaro, vamwe vanhu havana hanya nekutaridzika kana kuumbwa kwezvinhu izvi. Nekudaro, mumawoko emuchengeti akangwarira uye mumba umo razvino harisi iro-rehupenyu hwese, munhu anogona kuita zvakawanda nechimwe chigadzirwa kugadzira nzvimbo yakanaka, inokwezva inonatsa madingindira ekumabvazuva. Sezvo zvikuru vakadzi vechidiki nevana vachikohwa bamboo, kushandisa zvigadzirwa izvi kunobatsira kupa nguva dzose basa nemari kune vanhu vanobatikana muindastiri.
Imba ine hombe rattan fenicha inoendesa pfungwa yekunyaradza uye dhizaini nekureruka mukugadzirwa uye kuzvidzora mumutengo. Silk machira, machira anokanda, uye zvimwe zvakawanda zvakawedzeredzwa zvinobatsira kupedzisa kuratidzwa kweEastern art nehunyanzvi. Tenga zvinyorwa zvemazuvano kubva kumafemu ekutengesa ewebhusaiti ayo anopa sarudzo yakasarudzika mumishenjere uye zvigadzirwa zverattan pamitengo yemakwikwi. Ive nekuchengera kuti yako rattan fenicha kutenga haipesane nezvimwe zvinhu munzvimbo yakapihwa, kana chokwadi, iyo yese imba. Zvese zvinofanirwa kuratidzira kwete chete muhukuru, dhizaini, uye ruvara, asi mukushongedza, dingindira, uye kuravira. Panzvimbo pekushandisa mbatya nekuda kwekushandisa mbichana, tsvaga nzira dzekuita kuti zvikwane nemidziyo yako pane kumanikidza kutarisa kuti imba yako haina kugadzirira kugara.